Google yatopa zuva rekupera kwekuenderana kweshanduro 2 ye Chrome Manifest | Kubva kuLinux
Google yakaburitsa nguva mariri mune zvakadzama kuti sei Kupera kwekutsigira vhezheni 2 kuchaitika kubva kune yayo Chrome inoratidzira inofarira vhezheni 3, iyo yakauya pasi pemoto yekukanganisa mazhinji ayo ekuchengetedza plugins uye kuvharira zvisina kukodzera zvemukati.
Pamusoro pekusanganisira iyo yechipiri vhezheni yeanoratidza, inozivikanwa ad blockerBlock Origin yakabatana, iyo isingakwanise kuendeswa kune yechitatu vhezheni yechiratidzo nekuda kwekuguma kwekutsigirwa kwenzira yekuvharira yewebhuRequest API.
Kubva muna Ndira 17, 2022, plugins vachishandisa iyo yechipiri vhezheni yeiyo expression haichazogamuchirwa muChannel Web Chitoro, asi vakambowedzerwa vagadziri vepulagin vacharamba vachikwanisa kutumira zvinyorwa.
Muna Ndira 2023, Chrome icharega kuve inoenderana neyechipiri vhezheni yeiyo expression uye ese plugins akabatanidzwa pairi anomira kushanda. Panguva imwecheteyo, kutumira zvigadziriso zvezvakadaro zvinowedzera paChrome Web Store zvicharambidzwa.
Pakutanga gore rino, ye Chrome 88, takazivisa kuwanikwa kweiyo nyowani vhezheni vhezheni yeiyo Chrome yekuwedzera ecosystem. Makore mukugadzira, Ratidza V3 yakachengeteka zvakanyanya, inoshanda, uye yakavanzika-kuchengetedza kupfuura iyo yakatangira. Iko kushanduka kweiyo yekuwedzera chikuva iyo inofunga zvese zviri kuchinja webhu mamiriro uye iro ramangwana re browser yekuwedzera.
Sezvo isu tichitarisa kune ramangwana uye tichiramba tichidzvinyirira uye nekuvandudza mashandiro eManifest V3, isu tinodawo kugovera ruzivo nezve chirongwa chekubvisa zvinowedzerwa kubva kuManifest V2.
Tinofanira kurangarira izvozvo iyo yechitatu vhezheni yechiratidziro, iyo inotsanangura kugona uye zviwanikwa kupihwa kune plugins, sechikamu chekutanga kusimbisa kuchengetedzeka uye kuvanzika, pane iyo webRequest API, iyo inosimudziraNetRequest API, iyo ine mashoma masimba, inokurudzirwa.
Kunyange i WebRequest API inobvumidza iwe kuti ubatanidze vako vega vatongi vane ruzivo rwakakwana kuzvikumbiro zve network uye vanogona kugadzirisa traffic pamhepo, declarativeNetRequest API inongopa mukana weinjini yekusefa kunze kwebhokisi rakavakirwa mubrowser iyo inobata yekuvharira mitemo yega. , iyo isingatenderi iwe kuti ushandise yako wega kusefa maalgorithms uye isingatenderi iwe kuti ugadzire yakaoma mitemo inopindirana ichibva pamamiriro.
Sezvo mazuva aya achiswedera, tichagovana rumwe ruzivo nezve iyo vhezheni yeChannel yakanangwa neshanduko, pamwe neruzivo rwakawanda nezvekuti vagadzirisi vekuwedzera nevashandisi vangakanganiswa sei.
Panguva ino, isu ticharamba tichiwedzera hunyanzvi hutsva kuManifest V3 zvinoenderana nezvinodiwa nemanzwi enharaunda yedu yekuvandudza. Kunyangwe mumwedzi mishoma yapfuura, pave paine huwandu hwekuwedzera kunonakidza kune yekuwedzera chikuva.
Sekureva kweGoogle, inoenderera ichishanda mukushandisa iyo NetRequest yekuzivisa inokwanisa mu plugins iyo inoshandisa webRequest, uye inotarisira kuunza iyo API nyowani mufomati inosangana zvizere nezvinodiwa zvevagadziri ve plugin varipo.
Mumwedzi iri kuuya, isu tichazoparurawo rutsigiro rwezvakanaka zvinogadziriswa zvinyorwa zvemukati uye yeye-mundangariro yekuchengetedza sarudzo, pakati pehumwe hutsva kugona. Shanduko idzi dzakagadzirwa nemhinduro dzemunharaunda, uye isu ticharamba tichivaka mashandiro eExpension API sezvo rumwe ruzivo rwuchigovaniswa nevagadziri.
Semuenzaniso, Google yatofunga nezve zvido zvevagari nekuwedzera rutsigiro kune inozivisaNetRequest API yematanho emitemo yakawanda, regex kusefa, kuchinjisa misoro yeHTTP, kugadzirisa nekuwedzera mitemo zvine simba, kubvisa uye kutsiva paramita. , uye musangano-wakasarudzika mutemo wakaseta zvisikwa.
Mumwedzi inotevera, zvakarongerwa kuenderera mberi nekutsigira zvinyorwa zvine simba zvinogadziriswa zvekugadzirisa zvemukati uye kugona kuchengetedza data mu RAM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Google yatopa zuva rekupera kwekuenderana kweshanduro 2 yeChiratidzo cheChiratidzo